DIPLAOMA HOSOKA : Natsangana ny sampan-draharaha hanao fanaraha-maso manokana
Atomboka eny amin’ny oniversiten’i Mahajanga ny fanaraha-maso ny diplaoma hosoka. 15 mai 2019
Natsangana ny sampan-draharaha mikirakira ny fanadihadiana amin’ny alalan’ny fampiasana rindrambaiko manokana, ahazoana manara-maso ireo diplaoma manomboka amin’ny fangatahana azy sy ny fisoratana anarana. Vao manomboka dia efa misy sahady ny tratra satria maro ireo manova ny naotiny sy manao naoty hosoka. Antontan-taratasy miisa 21 no nahitana tsy fahatomombanana ahazoana diplaoma tamin’ny taona 2017-2018 ka mpianatra miisa efatra no niakatra fitsipi-pifehezana.
Miisa fito kosa ny raharaha efa miakatra Fitsarana amin’io taom-pampianarana io ihany. Hatao eny amin’ ny oniversite manerana an’i Madagasikara izao fanadiovana izao, ahafahana mizotra miandala amin’ny rafitra LMD ka mba tena ny fahaizana no ahazoana diplaoma ahafahana mahazo asa. Betsaka ny sehatr’asa ahitana olona manana diplaoma sandoka ankehitriny. Efa ela izy io no nisy saingy izao vao misy fanadiovana. Ny olana dia hatramin’ny sehatra saropady dia misy ireo olona tsy manana fahaizana fa nividy diplaoma fotsiny, ka lasa loza mihantona ho an’ny mpiara-belona. Efa heno fa hatramin’ireo mpitsabo dia misy tsy manana fahaizana akory fa diplaoma sandoka no nahazoany asa, nefa dia ain’olombelona no lalaovina. Efa misy ireo minisitera manao ny fanadiovana ao aminy, ka mikatsaka ireny olona mampiasa diplaoma sandoka ireny. Voaroaka avy hatrany na ampidinina grady kosa izay tratra.